Ameerikaa fi Uummata Ishee VOA Afaan Oromoo is targeted to Ethiopia's single largest ethnic group, roughly 40 percent of the population of the nation who live in central and southern Ethiopia. Afaan Oromoo is also spoken by Oromoo living in northern Kenya and by Oromoo exiles in Su
Qophii Fayyaa VOA Afaan Oromoo is targeted to Ethiopia's single largest ethnic group, roughly 40 percent of the population of the nation who live in central and southern Ethiopia. Afaan Oromoo is also spoken by Oromoo living in northern Kenya and by Oromoo exiles in Su
Waa’ee Uummata Oromoo Kana Beektuu Laata? VOA Afaan Oromoo is targeted to Ethiopia's single largest ethnic group, roughly 40 percent of the population of the nation who live in central and southern Ethiopia. Afaan Oromoo is also spoken by Oromoo living in northern Kenya and by Oromoo exiles in Su
Dirree Dimookiraasii VOA Afaan Oromoo is targeted to Ethiopia's single largest ethnic group, roughly 40 percent of the population of the nation who live in central and southern Ethiopia. Afaan Oromoo is also spoken by Oromoo living in northern Kenya and by Oromoo exiles in Su
Half-hour broadcasts in Afaan Oromoo of news, interviews with newsmakers, features about culture, health, youth, politics, agriculture, development and sports on Monday through Friday evenings at 8:30 in Ethiopia and Eritrea. Subscribe
VOA Afaan Oromoo presents VOA original video reports covering news, politics, health, business, economy, technology, sports, entertainment, music and more.
VOA Afaan Oromoo is targe
Kuusaa Suuraalee VOA Afaan Oromoo is targeted to Ethiopia's single largest ethnic group, roughly 40 percent of the population of the nation who live in central and southern Ethiopia. Afaan Oromoo is also spoken by Oromoo living in northern Kenya and by Oromoo exiles in Su
KLIPPII SAGALEE GABAABAA